စိတ် နဲ့နွယ်တဲ့ ဆိတ် - Myanmar Network
စိတ် နဲ့နွယ်တဲ့ ဆိတ်
Posted by Betty on January 15, 2015 at 11:34 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဆိတ်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါက ရှေးရှေးကတည်းက လူသားတို့ကို အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆိတ်ကနေ အသားရတယ်၊ ဆိတ်နို့၊ ချိစ်က အစ ဆိတ်သားရေ အဆုံး အသုံးဝင်လှတဲ့ အရာတွေ ရရှိပါတယ်။ နောင်လည်း လူသားတွေကို ဆက်လက် အကျိုးပြုသွားမယ့် သတ္တဝါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းစွာဘဲ ဆိတ်က အခြား လူသား အကျိုးပြု သတ္တဝါတွေလောက် ချစ်ခင်ခြင်း မခံစားရပါဘူး။ ယုတ်ဆွအဆုံး ကလေးတွေရဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေမှာတောင် ဆိတ် ဇာတ်ကောင် သိပ်မတွေ့ရပါဘူးနော်။ ဆိတ်ကို အချို့နိုင်ငံတွေမှာ dirty unwelcome creature အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး နှိပ်စက် ကန်ကြောက်တာတွေတောင် ရှိပါတယ်။
ဆိတ်ရဲ့ လူသားတွေအပေါ် ပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေထဲက တစ်ခုကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားမှာ တွေ့ရပါတယ်။ goat ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတဲ့ expression တစ်ချို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိသာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ယောင်္ကျားအချို့ မေးစေ့မှာပဲ မုတ်ဆိတ်မွှေး ရှည်ရှည် ထားတာ မြင်ဖူး ကြမှာပါ။ အဲ့ဒီ မုတ်ဆိတ်မွှေးကို goatees လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆိတ်ထီးတစ်ကောင်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ တူလို့ပါ။
အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာ “to get one’s goat” ဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်ဆိုး၊ ဒေါသ ထွက်အောင် လုပ်သည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ expression ရှိပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို “that really gets my goat” လို့ ပြောလာရင် အဲ့ဒီလူဟာ တော်တော် စိတ်ဆိုး ဒေါသ ထွက်နေတယ်ဆိုတာ သင် သဘောပေါက်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ expression က တော်တော်ထူးတဲ့ expression လို့ ဆိုရမှာဘဲ။ ဆိတ်က အဲ့ဒီ expression နဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်ပြီး ပေါ်လာခဲ့ရသလဲ ဆိုတဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ expression က ဘယ်လို စတင်ခဲ့သလဲဆိုတာ လူအများစု ယုံကြည်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တော့ ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းက မြင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်မြင်းတွေထားတဲ့ ဝိုင်းထဲမှာ မြင်းပိုင်ရှင်က ဆိတ်တစ်ကောင်ကို မြင်းတွေကြားထဲမှာ လွှတ်ထားပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆိတ်က ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ မြင်းတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြင်းတွေကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်တဲ့။ မြင်းတွေ စိတ်ငြိမ်နေတဲ့အခါ ပြိုင်ပွဲ ကောင်းကောင်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ အကျင့်မကောင်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေက တစ်ဖက်ကလူရဲ့ မြင်းဝိုင်းထဲ လွှတ်ပေးထားတဲ့ ဆိတ်ကို ခိုးယူ သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ မြင်းတွေက nervous ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကောင်းကောင်း မဝင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီတော့မှ သူတို့ရဲ့ မြင်းက အနိုင်ရအောင် ကြံတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲ့ဒီလို ဆိတ်ကို ခိုးယူတာဟာ တစ်ဖက်မြင်း ပိုင်ရှင်ကို တစ်အား စိတ်ဆိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့် တစ်အား စိတ်ဆိုးတယ် ဆိုရင် “..that gets my goat” လို့ ပြောကြတယ်ပေါ့။
ပြင်သစ် စကားမှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ လောက်ကတည်းက သုံးခဲ့တဲ့ ဆိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလားတူ expression ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်တွေ သုံးတဲ့ expression ကတော့ အဲ့ဒီလောက် မကြာသေးပါဘူး။ ဆိတ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အစောဆုံး အသုံး တစ်ခုကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်လောက်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ Jack London ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ Smoke Bellow ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီ စာအုပ်မှာ နှင်းခဲတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တံတားတစ်ခုကို ဖြတ်နေတဲ့လူ ၂ ယောက်အကြောင်းကို London က ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခဲတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တံတားမို့လို့ ကြံ့ခိုင်မှု မရှိတဲ့အပြင် အချိန်မရွေး ပြိုကျ သွားနိုင်ပါတယ်။ ပထမလူက ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်တော့ နောက်ကနေ လိုက်ကူးမယ့် ဒုတိယလူကို အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ “Don’t look down! That’s what got my goat!” တဲ့။ အဲ့ဒီလူက သူ့ဆိတ် ပြုတ်ကျသွားတဲ့ အကြောင်း ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ကို မကြည့်နဲ့။ အောက်ကို ကြည့်ရင် ကြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောတာပါ။ goat ဆိုတာ ဒီနေရာမှာတော့ ကြောက်စိတ်ကို ပြောတာပေါ့။
“Get your goat” ကို နောက်တစ်မျိုးလည်း သုံးသေးတယ်။ ဒါက နည်းနည်းပေ့ါပါးတဲ့ စိတ်ဆိုးတာနဲ့ ပါတ်သက် ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ဟာက တစ်စုံတစ်ယောက်က နောက်ပြောင်တာ သင့်အပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်လဲဆိုတာကို ဖေါ်ပြတဲ့ expression အနေနဲ့ သုံးတာပါ။ ဥပမာ- တစ်ယောက်ယောက်က နောက်ပြောင်လိုက်လို့ သင်က စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုရင် သူက သင့်ရဲ့ goat ကို ရသွားတယ်ပေါ့။
If you become upset or angry byajoke played on you, your friends may say that the jokes “got your goat”
အနောက်ခံရတဲ့ သင်က ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဘယ်လိုမှ မနေဘူးဆိုရင် “The Jokes didn’t get your goat.” ပေါ့နော်။
Permalink Reply by thinkhaingsoe on January 16, 2015 at 9:06
Permalink Reply by sandar on January 17, 2015 at 17:59
Permalink Reply by Yu Ya on January 21, 2015 at 23:21
Permalink Reply by thae thae htwe on January 22, 2015 at 17:12
we can study lessons and get knowledge from this lesson, thanksalot.
Permalink Reply by thae thae htwe on January 22, 2015 at 17:17
Please postalot such kind of lessons